May 21, 2019 La Wadaag Arag Fikradaha Print Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya ay horumar ka samaynayso dhismaha dawladnimo oo ay shaqaynayso. Hase yeeshee António Guterres waxa uu ka digay in xagjirnimada, colaadda, musuqmaasuq iyo xasillooni-darrada siyaasadeed ay halis ku yihiin horumarkaas. Warbixintan ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan. EMBED SHARE Guterres: Horumarka Soomaaliya halis ayuu wajahayaa by VOA EMBED SHARE The code has been copied to your clipboard. The URL has been copied to your clipboard La wadaag Facebook La wadaag Twitter https://www.voasomali.com/a/4926074.html No media source currently available | Somalilandhorta
Browse: Home / May 21, 2019 La Wadaag Arag Fikradaha Print Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya ay horumar ka samaynayso dhismaha dawladnimo oo ay shaqaynayso. Hase yeeshee António Guterres waxa uu ka digay in xagjirnimada, colaadda, musuqmaasuq iyo xasillooni-darrada siyaasadeed ay halis ku yihiin horumarkaas. Warbixintan ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan. EMBED SHARE Guterres: Horumarka Soomaaliya halis ayuu wajahayaa by VOA EMBED SHARE The code has been copied to your clipboard. The URL has been copied to your clipboard La wadaag Facebook La wadaag Twitter https://www.voasomali.com/a/4926074.html No media source currently available
May 21, 2019 La Wadaag Arag Fikradaha Print Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya ay horumar ka samaynayso dhismaha dawladnimo oo ay shaqaynayso. Hase yeeshee António Guterres waxa uu ka digay in xagjirnimada, colaadda, musuqmaasuq iyo xasillooni-darrada siyaasadeed ay halis ku yihiin horumarkaas. Warbixintan ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan. EMBED SHARE Guterres: Horumarka Soomaaliya halis ayuu wajahayaa by VOA EMBED SHARE The code has been copied to your clipboard. The URL has been copied to your clipboard La wadaag Facebook La wadaag Twitter https://www.voasomali.com/a/4926074.html No media source currently available
Posted by Yasmin Ahmed on May 21, 2019 in Warar | 23 Views | Leave a response
“Arrintaas uma arko in ay wax wayn tahay, Soomaaliya xaq bay u leedahay in ay iibgayso shidaalkeeda, balse midda kaliya ee Kenya ay ka dhawaajineyso waa in labada dal ay kawada hadlaan dhulka lagu muransan yahay inta aan tallaabooyin kale la qaadin”, ayuu yiri Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha siyaasadda iyo geeska Afrika ka faallooda.
Kenya ayaa qabsoomidda shirkan uga falcelisay “in ay erido” safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkeeda iyo in ay u yeerato safiirkeeda ka jooga Muqdisho.
Xiisaddaas diblumaasiyadeed ayaa markii dambe lagu xalliyay qaab wada xaajood ah oo uu gar wadeen ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo kulan isugu keenay madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Kenya.
“Masuuliyiinta Kenya markaad waydiisiyid waxay kuu sheegayaan ‘rajadeennu aad ayay u fiican tahay’, markaad Soomaalida waydiisidna waxay leeyihiin ‘rajadeennu aad ayay u fiican tahay’, kolley maxkamadda ayaa go’aan ka gaari doonta”, ayuu yiri.
Si kastaba ha ahaatee lix bilood ayaa ka hartay muddada Maxkamadda ICJ ay u qabatay go’aan ka gaarista kiiskaan, balse waxaa muuqata in ayadoo aan muddadaas la gaarin uu sii xumaanayo xidhiidhka Kenya iyo Soomaaliya.
“Arrinta kale ee la isku haysto ee muranka wayn uu ka taagan yahay waa arrinta Kismaayo, dawladda Kenya waxay taageeraysaa Axmed Madoobe wax qarsoonna maahan, waxayna doonaysaa in aan meesha laga qaadin, halka dawladda Soomaaliya ay diiddan tahay in Axmed madoobe uu sii joogo”, ayuu yidhi Cabdiwahaab Sheekh Cabdisimad.
Kenya oo bad la’aan noqota
Qaar ka mid ah aqoonyahannada dalka Kenya ayaa soo jeedinaya aragtiyo ku aaddan in Kenya ay noqonayso bad la’aan haddii Soomaaliya ay ku guulaysato dacwadda muranka xuduudda.
Muuqaal oo ay soo duubeen ardey Kenyan ah oo jaamacado ka dhigta dibedda ayaa lagu sheegay in “Soomaaliya oo kaashanaysa dalal caddaan ah ay gumaysan rabto Kenya”, isla markaana ay doonayso in ay dhacdo badda lagu muransan yahay.
Dhaliyarada muuqaalka ku jirta ayaa ku doodaya in haddii maxkamadda cadaallada ee caalamiga ah ay go’aamiso in Soomaaliya ay leedahay badda lagu muransan yahay, ay taasi horseedi doonto in “Kenya ay noqoto dal aan bad lahayn”.
“Ma oggolaaneyno in taako kamid ah dhulkeenna la qaato… waxaan ku wargelineynaa walaalahayaga Soomaalida ee aanan taageerada siinnay, ee qaxootinimada kasoo gudbay ee noqday milkiilayaasha xaafadda Islii, rugta ganacsiga labaad ee ugu weyn Nairobi waa iney joojiyaan xukuumadda Muqdisho”, ayaa lagu yiri muqaalka.
“Hadalkaas waxaa yidhi ninka la yiraahdo Mutahi Ngunyi oo ah nin aqoon yahan ah, Dawladda Kenya ma aysan oran, Kenya-na ma noqon karto dal aan bad lahayn, waayo dhulka lagu muransan yahay waa Boqol kilometre oo iskuweer ah oo akliya”. Ayuu yidhi Dr Abdiwahaab Sheekh Cabdismad.